Art na-egosipụta ụzọ nke mbugharị - World March
Home » Noticias » Pịa Ihe edeturu » Art na-egosipụta ụzọ nke njem
Art na-egosipụta ụzọ nke njem
04 / 05 / 2020 14 / 03 / 2020 site Antonio Gancedo
N'ime oge ọnwa Machị, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'ihe omume ọ bụla, ọtụtụ ngosipụta nke ihe osise malitere ile ha ọbịa, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ịbụ isi okwu ha na-egosipụta.
Anyị emeelarị ihe nchịkọta nke mbụ banyere ọrụ nka nke ụgba ahụ na ederede Ngwakọta nke Art na Marchwa Machị.
N'ime nke a, anyị ga-aga n'ihu na nlegharị anya nke ngosipụta nka nke egosipụtara n'oge njem nke World World nke abụọ.
1 N’Afrika, foto, ịgba egwu na rap
2 Ihe osise Lola Saavedra na eserese nke Udo
3 Art na Oke Osimiri Mediterenian nke udo
4 N'Itali, ọtụtụ atụmatụ
5 Isi na South America na-agafe agafe, nka nwere ebe etiti
6 Na Asia na-agba egwu
7 Maka Europe, Bel Canto
8 Thebọchị Machị dị na Madrid kwụsịrị
9 Ma na njedebe nke njem ahụ
N’Afrika, foto, ịgba egwu na rap
Na mkpokọta, n'oge ngafe Africa nke 2nd World March, otu ndi na - ese foto kpuchie ihe omume niile. Ọụ ndị ntorobịa na ezi ihe ọmụma kọwapụtara ha.
Na ikuku nke mmekọrịta enyi na ike nke ntorobịa, ndị na-ese foto anọ na onye igwefoto kpuchiri 2nd World March maka Peace na Nonviolence n'okporo ụzọ Morocco.
Mgbe ị banyere Senegal, na Saint Louis, n'ehihie nke Ọktọba 26, etiti Don Bosco mere, ihe omume nke ewepụtara ngosipụta nke World March, nke akụkụ ọdịnala ya bụ ihe nnọchi anya ndị agha egwuregwu Juvep, Mkpoko General Kheuch na Slam Issa bụ onye na-etinye ọnọdụ dị mma.
Ihe osise Lola Saavedra na eserese nke Udo
Coruña plastic omenka Lola Saavedra na-arụkọ ọrụ na nka ya na "2nd World March for Peace and Nonviolence" na-arụ ọrụ nke na-egosipụta ụkpụrụ udo, ịdị n'otu na enweghị ntụkwasị obi.
Dum oge nke March ihe omume mepere emepe A Coruña, Spain akpọ NWAANYI EGO NA EGO NA NZUZU, Coruña.
Art na Oke Osimiri Mediterenian nke udo
N'uzo ozo, ebumnuche nke udo nke uwa bu nke ekesara ma nabata nka maka udo. Oké Osimiri Mediterranean nke Udo.
N’otu aka, Oke osisi, ụgbọ mmiri nke emere njem nke ebum n’obi a, buuru atụ nke eserese Udo nke puku kwuru puku n’atụmatụ a. Agba nke Udo.
N’aka nke ọzọ, n’ọdụ ụgbọ mmiri ndị batara ka ha na-esonye na ememme dị iche iche mgbe niile.
N'ihi ya, na Marseille, na Thalassantè: “Na-abụ abụ maka udo, na-abụkọ ọnụ ka anyị na-ege ibe anyị ntị ka anyị wee jikọọ olu. Ọ bụ otu a ka anyị si eme ya: anyị na-abụ abụ, na-ekwu okwu ma na-ege ntị na ahụmịhe nke ndị ọzọ. " Anyị niile ka anyị sonyere na-abụ abụ 31 October nke 2020.
Na Barcelona, ​​n'omume a rụrụ n'ụgbọ mmiri “Preace Boat” ebe ndị lanarịrị Hiroshima na Nagasaki gawara ụwa na-agbasa ozi maka Udo na megide bọmbụ nuklia, enwere ike inwe mmetụta a:
N'ebe ahụ, e gosipụtara eserese ụmụaka nke ebumnuche "Agba nke Udo", La Hibakusha, Noriko Sakashita, malitere ihe omume ahụ site na ịgụrụ uri "Ndụ n'ụtụtụ a", Miguel López sonyere cello, na-egwu egwu "Cant" dels Ocells ”nke Pau Casals, nke na-egegharị na ndị na-ege ntị na ọnọdụ mmetụta. Yabụ na anyị nwere ike ịhụ ya na edemede Ndi otu ICAN na Peace Boat.
N'ikpeazụ, Osimiri Uhie nke Mediterranean, n'etiti November 19 na 26, na-emechi akụkụ ikpeazụ nke njem ahụ.
Na Livorno, enwere nzukọ na Old Ebe e wusiri ike:
“Otu n'ime ndị bịaranụ bụ Antonio Giannelli, onye isi otu agba udo, anyị weghachitere mpempe Peace Peace na atụmatụ iri anọ nke ngosi udo, na mkpokọta karịrị puku ise, nke nwere soro anyị mee njem n'oké osimiri Mediterenian.
Antonio na-akọ akụkọ ahụmịhe nke Njikọ ya, nke dabeere na Sant'Anna di Stazzema, obodo ebe ndị Nazi gbagburu mmadụ 1944 na 357, mmadụ 65 bụ ụmụaka. ”
N'Itali, ọtụtụ atụmatụ
Na wetali anyị nwere ike ịga ọtụtụ ihe omume nke nkwado na nka agha bụ onye na - ebuso agha.
Fiumicello Villa Vicentina, kwalitere ọtụtụ ọrụ ebe ọrụ ihe osise a mere ka ọ pụta ìhè:
Na Fraịdee 06.12 ihe nkiri egwu "Magicabula" nke Cultural Association "Parcè no? ... a na-ezo anwansi nke ekeresimesi n’ime anyi niile ...
N'etiti mmeme nkwado nke Abụọ Mgbakọ nke Abụọ, arụmọrụ nkiri.
Na Satọdee 14.12 na 20.30 ụlọ ọrụ ihe nkiri Lucio Corbatto si Staranzano rụrụ: Anyị na Campanilismi nwere egwuregwu pụrụ iche site na Achille Campanile.
Titas Michelas Band na-akwado World March n'oge Egwuregwu Epiphany
Na Jenụwarị 6, Banda Tita Michelàs nyere ndị Fiumicello Villa Vicentina egwu egwu nke afọ maka afọ 2020.
Ndị ọchị ọchị n'ime ụlọ Bison: n'ime mmemme ekeresimesi, ndị nnọchiaha “Serata omicidio” na “Venerdì 17” nọchitere anya ya.
Na Satọde, Disemba 21 na Sunday, Disemba 22, 2019, '' 'Bison' Room nke Fiumicello Villa Vicentina, n'elekere asatọ nke ụtụtụ. ihe nkiri egwuregwu nke lolọ ọrụ Philodramatic
N'ikpeazụ, n'ime oge mara mma ịkekọrịta na Fiumicello:
Saturdaybọchị Satọde a gara aga, 22/02/2020, anyị na ndị Scoum nke Fiumicello, anyị na-ede ma na-ese Udo na Ọgba aghara.
Na Satọde 22/02/2020 n'ehihie ndị Fiumicello 1 ndị Scout zutere anyị na gburugburu ha: ha na-ekwu maka Udo na Ọgba aghara. Anyị na-abụ abụ ọnụ.
Udo diri udo, onye obula dere ihe edere na ihe ya na-egosi maka onwe ya.
Na, na Vicenza, "Egwu na okwu udo" na Rossi:
Ihe dị ka ụbọchị iri abụọ tupu World March maka Udo na Ime Ihe Ike agaghị agafe Vicenza, kọmitii nkwado Vicenza, na mmekorita nke ndị na-ese ihe nkiri Pino Costalunga na Leonardo Maria Frattini, haziri maka Fraịde, Fee 7, na Elekere 20.30 nke ehihie, na ụlọ ọrụ “Rossi” (site na Legione Gallieno 52), ihe nkiri “Egwú na Okwu nke Udo”.
O bu ihe nwute, na nbuputa nke COVID-19 na ihe mgbochi nzuzo ekwesiri ịkwụsị oria ojoo a, akagbuo mmemme nile nke atughari uzo aga-abuo nke abali abuo nke March.
Enwere nkwa na ihe omume ndị a na-eme na ọdịda nke afọ a.
Hụ gị n'oge na-adịghị anya, !tali!
Isi na South America na-agafe agafe, nka nwere ebe etiti
En Ecuador, The Fine Arts Foundation na World Association Na-enweghị Agha na Ime Ihe Ike sonyeere iji gosi na nke mbụ oge Ihe ngosi Guayaquil maka udo na anaghi agha. Ngụkọta mmadụ 32 dị n’etiti ndị mba ọzọ na ndị mba ọzọ na-esonye na emume a mepere na Disemba 10, 2019
En Colombia, n'etiti November 4 na 9 anyị gara nraranye nke ọtụtụ ihe ọkpụkpụ.
N'otu ụbọchị ahụ, na Universidad Bogotá Bogota Columbia, a malitere ịgba ihe osise ahụ Na udo nke nnwere onwe nke Master Ángel Bernal Esquivel.
A malitere ọchịchị nke Silo, Mario Luis Rodríguez Cobos, onye guzobere òtù Universalist Humanist. N'ime omume ahụ, Rafael de la Rubia, onye ọkpụ ụkọ ihe, ndị nnọchite MSGySV nke Colombia na ndị ọchịchị.
En Perun'ime nka nka Na Disemba 17, na Arequipa, a haziri ememme omenta.
Na Disemba 19 kwa, ihe omume ndị ahụ gara n'ihu ma na Tacna, a na-enwe nnabata ndị Base Team nke ụbọchị nke abụọ nke ụwa na ọnụ ọgụgụ nka na ebe egwuregwu Michulla.
Ka ị na-agafe Argentina, Ndi Isi, na akụkọ ihe mere eme Park nke Study na Reflection nke Punta de Vacas, onye ukwe sitere n'obodo dị nso nabatara ya. Abụ obi ụtọ nke jupụtara ebumnuche kacha mma.
Ha sonyekwara na nnabata nke “Muralito” mara mma. Rafael na Lita gosipụtara Mural nke ụfọdụ ndị enyi si Community of La Plata mere.
Rafael de la Rubia kwuru na enwerelarị '' ihe ịrịba ama 'ndị ọzọ nke sonyere na Machị, dị ka ọ dị na Colombia, ebe a na-ewepụta Plaza nke aha Silo na mgbagha nke Silo.
En Chile, ndị na-ere ahịa sonyere na ntụgharị uche, njem na obi ụtọ:
Thezọ Machị na-aga n'okporo ụzọ ndị agbata obi na-ekwu na ha chọrọ mgbanwe dị ukwuu na ụlọ ọrụ na ndị mmadụ.
Ndị otu ahụ, ihe ngosi nke ọ joyụ hiwere isi iji gosipụta mmụọ nke a ga-emerịrị ọ ,ụ, ọ joyụ nke iwepụ ọdịnihu na-enweghị ike ime ihe ike.
Na Asia na-agba egwu
Otu n'ime ihe omume ndi ozo, na Asia, na India, n’oge gboo, ndị na-ere ahịa ha tụgharịrị uche na egwu dị mma.
Maka Europe, Bel Canto
En Francia, ejikere dị iche iche kwadebe ihe dị iche iche.
Na February 7, 2020 na Rognac, ndị otu ATLAS gosipụtara ihe ngosi nka nka akpọrọ “Anyị enwerela onwe anyị”, N’ime usoro nke World World March 2 maka Udo na Nsogbu.
Ma na Augbagne, ha nwere “Bụ abụ maka mmadụ niile".
Na Fraịdee Febụwarị 28, 2020, n'ime usoro nke 2nd World March for Peace and Non-Violence, a na-eme abalị n'abalị a na-emeghị emezi emezi na Aubagne ma meghee mmadụ niile.
Ndi otu EnVies EnJeux haziri ihe omume a.
Ana m abụ abụ maka onye ọ bụla nọ na Aubagne: https://theworldmarch.org/canto-para-todos-y-todas-en-aubagne/
Thebọchị Machị dị na Madrid kwụsịrị
Na Mach 8, agba nke abụọ maka udo na anaghị eme ihe ike kwụsịrị na Madrid.
N'agbata Machị 7 na 8, ọrụ nke mmechi nke March na Madrid.
N'elekere asaa nke ụtụtụ na Ebe Omenala del Pozo na agbata obi Vallecas, egwu ejima n'etiti Úlọ akwụkwọ Núñez de Arenas, Ogwuru egwu Pequeñas Huellas (Turin) na Manises Cultural Athenaeum (Valencia); otu narị ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị mere iberibe egwu dị iche iche, na ụfọdụ abụ rap.
Na n'ụtụtụ nke 8, na mmemme ikpeazụ, ya na nnọchite nke akara mmadụ nke anaghị eme ihe ike, o nyere nnwere onwe na ịgba egwu egwu n'efu. N’ebe ahụ, n’Ozi Ebube, a mụrụ egwu miri emi maka ntọhapụ ụmụ nwanyị n’olu Marian Galan (Womenmụ nwanyị na-eje ije Udo). Arịrịọ na-esite n'aka ụmụ nwanyị dịka ndị na-elekọta mama Earth.
Ma na njedebe nke njem ahụ
Ecuador rụkwara ọrụ ụbọchị nke njedebe nke ọnwa nke abụọ nke Mach.
Folklọ akụkọ ọdịnala Ecuadori nọkwa, yi uwe ndị nnọchiteanya nke ugwu anyị, ndị agba egwu ji aka wee sị "KWES PER PE INWE INWE, Ọ B VGH V VIOLENCE."
Na… N’ikpeazu, ekele maka Udo nke Udo nke Italy, a na-agwa ndi gbara asambodo ka ha bia gosiputa ihe osise 120 umuaka si n’uwa niile wee mee.